ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ (၁၅)ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲနှင့် တရုတ်-အာဆီယံ စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြား | Myanmar President Office
ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ (၁၅)ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲနှင့် တရုတ်-အာဆီယံ စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြား
Submitted by cwmpo4 on Thu, 09/13/2018 - 11:05
နန်နင်း စက်တင်ဘာ ၁၂
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေသည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နန်နင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန၌ ကျင်းပသည့် (၁၅)ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲနှင့် တရုတ်-အာဆီယံ စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထိပ်သီး အစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်သည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တရုတ်ကွန်မြူနစ် ပါတီဗဟိုကော်မတီ ပေါ်လစ်ဗျူရို အမြဲတမ်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်နှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Han Zheng နှင့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်အကြီးအကဲများ၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ သန်းမြင့်၊ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသစ်လင်းအုန်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်စိုး၊ နန်နင်းမြို့ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဦးစိုးသက်နောင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ တက်ရောက်ကြသည်။
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟို ကော်မတီ ပေါ်လစ်ဗျူရို အမြဲတမ်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်နှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Han Zheng က အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် အကြီးအကဲများက မိန့်ခွန်းများပြောကြားကြသည်။
ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေက မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ပထမဦးစွာ မိမိနှင့် မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို(၁၅)ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲတက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားမှုနှင့် နွေးထွေးသည့် ဧည့်ဝတ်ပျူငှာပြုမှုများတွက် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရ၊ ကွမ်ရှီးကျွမ့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် (၁၅) ကြိမ်မြောက် တရုတ်- အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲ ဖြစ်မြောက်အောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်သူများကို ကျေးဇူး တင်ရှိပါသည်ဟု ပြောကြားလိုပါကြောင်း။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲကို နှစ်စဉ်နန်နင်းမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်လေ့ရှိသည့် ကုန်စည်ပြပွဲမှ သိသာထင်ရှားသည့် ရလဒ်ကောင်း များရရှိသည့်အတွက်လည်း ကျေနပ်အားရဖြစ်မိပါကြောင်း၊ ကုန်စည်ပြပွဲ အနေဖြင့် အာဆီယံ-တရုတ် မဟာဗျူဟာမြောက်ဆက်ဆံရေးကို ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ခရီးသွားလာရေးနှင့် ပြည်သူများအကြား ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတို့မှ တစ်ဆင့် ပိုမိုခိုင်မာလာအောင် နည်းလမ်းများ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်သည့် အရေးပါသော နေရာတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်သွားလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း။
တရုတ်နိုင်ငံသည် အာဆီယံအဖွဲ့ကြီး၏ သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံး ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်သည် အာဆီယံ-တရုတ် မဟာဗျူဟာမြောက် ဆွေးနွေးဖက် ဆက်ဆံရေး (၁၅)နှစ်ပြည့်မြောက်သည့် နှစ်ဖြစ်သည့်အတွက် မိမိတို့၏ မိတ်ဖက်ဆံရေး အတွက် ထူးခြားသည့်နှစ် တစ်နှစ်ဖြစ်ပါကြောင်း။
အာဆီယံပေါင်းစပ်ဆက်သွယ်မှု မဟာစီမံကိန်း (၂ဝ၂၅)နှင့် အာဆီယံပေါင်းစည်းရေး ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုမှုလုပ်ငန်း စီမံကိန်း(၃)ခု အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုမှ တစ်ဆင့် မိမိတို့၏ အာဆီယံအသိုက်အဝန်း တည်ဆောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုနှင့် အာဆီယံ ပေါင်းစည်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီမှုများအတွက် တရုတ်နိုင်ငံကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
တရုတ်နိုင်ငံသည် အာဆီယံ၏ နံပါတ်တစ် ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအဖြစ် ၈ နှစ် တိုင်တိုင် ရပ်တည်လျက်ရှိနေပြီး အာဆီယံ-တရုတ် ကုန်သွယ်မှုပမာဏသည် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံ စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှုပမာဏ၏ ၁၇ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံသည် အာဆီယံ၏ တတိယအကြီးဆုံး နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အရင်းအမြစ်အဖြစ် ရပ်တည်နေသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါကြောင်း။
ယခုလိုကောင်းမွန်သည့် အရှိန်အဟုန်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်ပါ ကြောင်း၊ ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်တွင် နှစ်ဖက်ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ထရီလီယံနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅ဝ ဘီလီယံ ရှိရမည်ဆိုသည့် ရည်မှန်းချက် ပြည့်မီရန်အတွက် မိမိတို့အနေဖြင့် စုပေါင်းကြိုးပမ်းမှုများကို နှစ်ဆမြှင့်တင်သွားရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ကို “အာဆီယံ-တရုတ် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှစ်”အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် အတွက် (၁၅)ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲ၏ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သော “(၂၁)ရာစု ပင်လယ်ရေကြောင်း ပိုးလမ်းမကြီးအား ပူးတွဲတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဆန်းသစ် တီထွင်မှုရှိသည့် တရုတ်-အာဆီယံ အသိုက်အဝန်းဆီသို့ ဦးတည်ခြင်း”သည် အထူးဆီလျော်မှုရှိပြီး အချိန်ကိုက်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
မိမိတို့အနေဖြင့် “အာဆီယံ-တရုတ် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှစ်” သတ်မှတ်ချက် အောက်မှ ဆောင်ရွက်သွားမည့် စီမံချက်များနှင့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ချက်များကို ကြိုဆို ပါကြောင်း၊ ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် (၂၁)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-တရုတ် ထိပ်သီး အစည်းအေဝးတွင် “သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာ အာဆီယံ-တရုတ် ပူးတွဲကြေညာချက်” ထုတ်ပြန်သွားရန် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အဆိုပြုချက်ကို မိမိတို့အနေဖြင့် ကြိုဆိုထောက်ခံပါကြောင်း။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး မတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်နေသည့် ယနေ့အချိန်တွင် မိမိတို့အနေဖြင့် ပိုမိုတီထွင်ဆန်းသစ်ရန် လိုအပ်သည့်အပြင် မျှေဝမှုရှိသည့် စီးပွားရေး၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေး၊ ခေတ်မီနည်းပညာ အသုံးပြုသည့် ကုန်သွယ်မှုနှင့် စတုတ္ထ စက်မှုခေတ်ပြောင်း တော်လှန်ရေးတို့ကနေ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အခွင့်အရေးများကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချသွားရ မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
တစ်ချိန်တည်းတွင် အာဆီယံ-တရုတ် မဟာဗျူဟာမြောက်ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုအရှိန်မြှင့်တင် သွားနိုင်ရန်အတွက် သိပ္ပံ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် နည်းပညာတိုးတက်မှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် နယ်ပယ်ကဏ္ဍသစ်များတွင်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရှာဖွေဖော်ထုတ် သွားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
နိုင်ငံများအကြားတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ဆက်သွယ်မှုများ တိုးတက်ကောင်းမွန် လာမည်ဆိုလျှင် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပြည်သူ ချင်း ဆက်သွယ်မှုနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုများလဲ ပိုမိုအားကောင်းလာမည်ဟု မိမိတို့အနေဖြင့် ယုံကြည်ထားပါကြောင်း။
မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ရှည်လျားသည့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည့် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်နှင့်အညီ “ရပ်ဝန်းနှင့်လမ်းကြောင်းစီမံကိန်း”၏ အရေးပါမှုကို အလေးထားပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် မေလတွင် ပေကျင်းမြို့၌ ကျင်းပခဲ့သည့် “ရပ်ဝန်းနှင့် လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖိုရမ်”တွင် ပါဝင်တက် ရောက်ခဲ့ပါကြောင်း။
အဆိုပါရပ်ဝန်းနှင့် လမ်းကြောင်းစီမံကိန်း အောင်မြင်ရန်အတွက် ပြည်သူအချင်းချင်း ကောင်းမွန်သည့် ဆက်ဆံရေးရှိရန်နှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိရန် အရေးကြီးသည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ရှုမြင်ထားပါကြောင်း။
အာဆီယံ ပေါင်းစပ်ဆက်သွယ်မှုမဟာစီမံကိန်း (၂ဝ၂၅)ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပံ့ပိုးကူညီပေးသည့် အာရှအခြေခံအဆောက်အအုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်နှင့် ပင်လယ်ရေကြောင်း ပိုးလမ်းမဘဏ်တို့အပါအဝင် တရုတ်အစိုးရ၏ ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုများနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ရှိသည့် ဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားမှုများအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
ရပ်ဝန်းနှင့်လမ်းကြောင်းစီမံကိန်းတွင် အရေးပါသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်သည့် (၂၁)ရာစု ပင်လယ်ရေကြောင်း ပိုးလမ်းမသည် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံများအကြား ပင်လယ်ရေကြောင်း ကုန်သွယ်မှုကွန်ရက်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ဆက်သွယ်မှု၊ ဆိပ်ကမ်း၊ သင်္ဘောနှင့်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခြင်း လွယ်ကူအဆင်ပြေစေမှု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုများ ရှိလာစေရန်အတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်လိမ့် မည်ဟု မိမိတို့မျှော်လင့် ပါကြောင်း။
ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းနှင့် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် ကမ်းခြေတွင်ရှိသည့် ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်း အပါအဝင် လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေသည့် အခြေခံအဆောက်အအုံ စီမံချက်များ ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန်အတွက်လည်း တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း။
အခါအခွင့်သင့်ခိုက် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကြိုးပမ်းမှုများကို ဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုး ပေးသည့်အတွက် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအပေါ် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ဟု ပြောကြား လိုပါကြောင်း။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နှစ်နိုင်ငံချင်းအနေဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အာဆီယံ-တရုတ် မဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး မူဘောင်အောက်မှဖြစ်စေ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးသည့် ဆက်ဆံမှု၊ နီးကပ်သည့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတို့ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရှိသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
(၂၁)ရာစု ပင်လယ်ရေကြောင်းပိုးလမ်းမနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိသည့် အာဆီယံ-တရုတ် အသိုက်အဝန်းတို့ကို ပူးတွဲတည်ဆောက်သည့်နေရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်သွားနိုင်ရန် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့် အခြား အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများနှင့် နီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဆိုသည့် မိမိတို့၏ ခိုင်မြဲသည့် ကတိကဝတ်ကို ထပ်လောင်းပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် အကြီးအကဲများက မိန့်ခွန်းများ ပြောကြားကြပြီး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အကြီးအကဲများက (၁၅)ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲနှင့် တရုတ်-အာဆီယံ စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို ဖွင့်လှစ်ပေးကြသည်။
ထို့နောက် ဒုတိယသမ္မတသည် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်၊ တရုတ် နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသစ်လင်းအုန်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်စိုး၊ နန်နင်းမြို့ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဦးစိုးသက်နောင်တို့နှင့်အတူ (၁၅)ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲတွင် ပါဝင်ပြသသည့် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု ကုန်စည်ပြ ခန်းဆောင် နှင့် ယခုနှစ်အတွက် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ဘားအံမြို့ကို နှစ်လိုဖွယ်ရာမြို့ (City of Charm)အဖြစ် ရွေးချယ်သတ်မှတ်၍ ဖွင့်လှစ်ပြသထားရှိသည့် မြန်မာအမျိုးသားပြခန်းဆောင်တို့ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီး ၎င်းပြခန်းဆောင်တွင် ကုန်စည်ပြပွဲကာလအတွင်း ဖျော်ဖြေတင်ဆက် မည့် ကရင်ရိုးရာအက ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုကို ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့သည်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဒုတိယသမ္မတသည် တရုတ်သတင်းဌာနများမှ မီဒီယာသမားများ အား လိယွမ်အစိုးရဧည့်ဂေဟာ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံပြီး ၎င်းတို့မေးမြန်းသည့် နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ မေးခွန်းများကို ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဒုတိယသမ္မတနှင့်အဖွဲ့သည် အာဆီယံ-တရုတ် သတင်းအချက်အလက် ဗဟိုဌာန (China-ASEAN Information Harbor)သို့ သွားရောက်လေ့လာသည်။
ညနေပိုင်းတွင် ဒုတိယသမ္မတနှင့်အဖွဲ့သည် နန်နင်းမြို့အခြေစိုက် မြန်မာ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး သို့ရောက်ရှိပြီး ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးမှ ဝန်ထမ်းများ၊ ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များနှင့် ပညာတော်သင် ရောက်ရှိနေကြသော ဝန်ထမ်းများအား တွေ့ဆုံအမှာစကား ပြောကြားခဲ့သည်။